ကိုသန်းလွင် ● မဲခေါင်မြစ်ကမ်းပါးမှ ကြုံးဝါးသံ | MoeMaKa Burmese News & Media
မောင်လူပေ ● ထရန့်၊ အီရန်ပြဿနာနှင့် အမျိုးသားရေး
ရွှေကူမေနှင်း - စနစ်ဆုိုး၏သားကောင်များ
စားကောင်းရုံ လုပ်ကြတဲ့ လောကကြီး (Saung Luu)
ငြိမ်းချမ်းအေး - စနစ်ဆိုး ရဲ့ ဖင်ပေါ်ခံ သားကောင်များ
လင်းငယ် ● မေးခွန်းမေးခြင်း အနုပညာ
ဖိုးထက် - ကောက်ရိုးမီး၊ ဆော်ဒါပုလင်း
စန္ဒာမော် ● ဝေးခဲ့ရပြန်တဲ့ ပန်းခရမ်းပြာသို့ ဦးညွတ်ခြင်း
မြန်မာပြန် TS ● လွယ်လွယ်လေး
ကိုသန်းလွင် ● အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းအပေါ် နှစ်ပေါင်း ၂ဝဝဝ ကျော်ကအမြင်
ကိုသန်းလွင် ● မဲခေါင်မြစ်ကမ်းပါးမှ ကြုံးဝါးသံ
(မိုးမခ) ဧပြီ ၅၊ ၂ဝ၁၈
မဲခေါင်မြစ်ပေါ်၌ နေဝန်းထွက်ပေါ်လာချိန်တွင် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကို နှစ်ပေါင်း ၃ဝ ကျော်အုပ်ချုပ်ခဲ့သော ဝန်ကြီးချုပ် ဟွန် ဆန် (Mr. Hun Sen) သည် တရုတ်သံအမတ်ကြီး၏လက်ကို ဆုပ်ကိုင်လှုပ်ယမ်းလိုက်ပါသည်။ “တရုတ်ခေါင်းဆောင်တွေ ဟာ ကျုပ်ကို လေးလေးစားစား ဆက်ဆံကြပါတယ်။ သူတို့နဲ့အတူ တန်းတူလိုသဘောထားတယ်” ဟု ဆိုသည်။ “ကျုပ်ကို တရုတ်နဲ့ နီးစပ်လွန်းတယ်လို့ ဝေဖန်တဲ့သူတွေကို ကျုပ်ကိုဘာပေးစရာရှိလဲလို့ မေးလိုက်ချင်တယ်။ ကျုပ်ကို ဆန်ရှင် (Sanction) လုပ်မယ်၊ ကျုပ်ကို စည်းကမ်းရှိစေချင်တယ်ဆိုတာတွေနဲ့ ကျုပ်ကို ပညာပေးဖို့ဘဲစဉ်းစားကြတယ်” ဟု ငြီးငြူ သည်။ တရုတ်ပြည်၏ အကူအညီနှင့်ဆောက်လုပ်သော ဒေါ်လာ ၅၇ သန်းတန်တံတားအတွက် အုတ်မြစ်ချပွဲတွင် ပြောဆို ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
၂၅ နှစ်တိုင်တိုင် ကမ္ဘောဒီးယားကို ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အမေရိကန်နှင့် ဥရောပနိုင်ငံများက ဒေါ် လာဘီလီယံချီ၍ အကူအညီပေးခဲ့ပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကို ခမာရှု့ခ်ျ (Khmer Rouge) က အုပ်စိုးနေပါ သည်။ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကို လစ်ဘရယ်ဒီမိုကရေစီ (Liberal Democracy) နိုင်ငံဖြစ်လာစေရန် ရည်ရွယ်ခဲ့ကြပါသည်။
အနောက်၏ စီမံကိန်းများ ကျရှုံးခဲ့ရပါသည်။ ထိုအရှုတ်အထွေးများကြားမှ ဟွန်ဆန်သည် ကမ္ဘောဒီးယားကို အရှေ့တောင် အာရှနိုင်ငံကြားမှ တရုတ်၏ သြဇာအလွှမ်းမိုးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လာစေရန် ဦးဆောင်ခဲ့ပါသည်။
အသက် ၆၅ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သော “Lord Prime Minister” ဝန်ကြီးချုပ်ကြီး၊ တပ်မတော်၏ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်ကြီးသည် နိုင်ငံကို နောက်ထပ် ဆယ်နှစ်အနှစ်နှစ်ဆယ်ကြာမျှ အုပ်ချုပ်ဦးမှာသေချာနေပါသည်။ လွန်ခဲ့သောကာလ များကအတိုက် အခံပါတီကို မတရားအသင်းအဖြစ်ကျေညာခဲ့သည်။ ဂျူလိုင်လတွင်ကျင်းပရန်ရှိသော ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဝင်နိုင်အောင် အတိုက်အခံပါတီဝင်များကို ထောင်ချခြင်း၊ သတင်းမီဒီယာများကိုလည်း သူနှင့်ပတ်သက်၍ မကောင်းသောသတင်းကို မလွှင့်ရန် ညွှန်ကြားခဲ့ပါသည်။
လွန်ခဲ့သောဆီးနိပ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် သူ့ပါတီ (Cambodia People’s Party) က နေရာအားလုံးတွင် နိုင်ခဲ့ပါသည်။ မစ္စတာ ဟွန်ဆန်၏ပါတီကို တရုတ်ပြည်ကြီးကလည်း ထောက်ခံပါသည်။ ဤအဖြစ်အပျက်များတွင် လူ့အခွင့်အရေးရရှိရေးနှင့် ဒီမို ကရေစီရေးရာများ မပါဝင်ခဲ့ပါ။
“အနောက်မှအကူအညီမရဘူးဆိုသည်နှင့် မစ္စတာဟွန်ဆန်သည် တရုတ်ပြည်၏ဘဏ္ဍာရေးအကူအညီနှင့် အထောက် အပံ့ အားလုံးကို လက်ခံရသည်။ တရုတ်ပြည်နှင့် ရင်းနှီးနီးကပ်စွာဆက်ဆံရသည်” ဟု အမေရိကန်ပြည်က ထောက်လှန်းရေး ရီပို့တစ်ခုတွင် ရေးသားထားပါသည်။
အရှေ့တောင်အာရှမှ ဒီမိုကရေစီစနစ် တဖြည်းဖြည်း ဆုတ်ယုတ်လာနေချိန်တွင် သမ္မတထရန့်၏ပေါ်လစီများကြောင့် အမေရိကန်မှ နေရာဖယ်ပေးသည့်အခါများတွင် တရုတ်ပြည်က နေရာဝင်ယူသည့်သဘောမျိုးကိုတွေ့ နေရပါသည်။ တရုတ် ပြည်ကို လွတ်လပ်စွာလုပ်ချင်ရာလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးလိုက်သလို ဖြစ်နေပါသည်။ တရုတ်ပြည်ကို ရှေးကရန်စကြောင့် ထော်လော် ကန့်လန့်လုပ်သည့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံရှိသလို တရုတ်၏လက်အောက်သို့ ကောင်းကောင်းရောက်ရှိသွားသည့် လာအိုနှင့်က မ္ဘောဒီးယားလိုနိုင်ငံတွေလည်း ရှိနေပါသည်။
ကမ္ဘောဒီးယားသည် အာဏာရှင် အုပ်စိုးသည့်နိုင်ငံလို ဖြစ်နေရသည်။ အမေရိကန်က အတိုက်အခံတို့အ ပေါ် နှိပ်ကွပ်မှုများကို အပြစ်ယူမည့်လက္ခာများမပြသည့်အတွက် ဟွန်ဆန်သည် အတိုက်အခံများအပေါ် လုပ်ချင်သလိုလုပ်ပြီး နှိပ်ကွပ်မှုများကို ဆင့်ကဲ ဆင့်ကဲပြုလုပ်လျက်ရှိပါသည်။
တရုတ်ပြည်သည် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၏ အကြီးမားဆုံးကုန်သွယ်မှုလုပ်ရာနိုင်ငံဖြစ်နေပါသည်။ နိုင်ငံခြားရင်းနှီး မြုပ်နှံမှုသုံးပုံ တစ်ပုံသည် တရုတ်ပြည်မှလာပါသည်။ မကြာမီကပင် တရုတ်တပ်မတော်မှ တင့်ကား ၁ဝဝ နှင့် သံချပ်ကာကားများ လက် ဆောင်ပေးသည်။
သူ့ဝန်ကြီးများကလည်း “(Infra-structure) ပရောဂျက်များအတွက်ဆိုလျှင် ဘယ်သူကပေးပေး လက်ခံကြောင်း သို့သော် လည်း ယခုအချိန်ထိတော့ တရုတ်ပြည်က အရက်ရောဆုံး ထောက်ပံ့မှုများကိုယူရကြောင်း” ဖြင့် ပြောသည်။ အမေရိကန်က ဖေဖော်ဝါရီလ၂၈ ရက်နေ့ကကျင်းပသော ဆီးနိပ်အမတ်ရွေးပွဲတွင် မဲကောက်ခံပုံကို မကျေနပ်၍ ထောက်ပံ့နေကျ ရံပုံငွေကို ဖြတ်တောက်ကြောင်း ကြေညာသည်။ ဂျာမနီနိုင်ငံကမှု ကမ္ဘောဒီယားအစိုးရဝန်ကြီးများ၏ ဗီဇာကိုကန့်သတ်ကြောင်း ကြေ ညာသည်။
ဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်က ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံအပေါ် စစ်တုရင်နယ်ရုပ်ကလေးများကို သဘောထားနေကြပုံကို ရှုံ့ချလိုက် သည်။ ပြင်သစ်က ကိုလိုနီပြုခဲ့သည်။ အမေရိကန်က သူတို့နယ်ထဲသို့ဝင်၍ ဗုံးကြဲခဲ့သည်။ ကုလသမ္မဂ္ဂ၏ နိုင်ငံတော်တည် ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများက ခြစားသောအမှုများ ပေါ်ပေါက်စေခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
ကမ္ဘောဒီးယားအတိုက်အခံခေါင်းဆောင် ကမ်ဆိုခ (Kem sokha) မှာ လွန်ခဲ့သော စက်တင်ဘာလက ဖမ်းဆီးခံရပြီး နိုင်ငံ တော်ပုန်ကန်မှုဖြင့် စွဲချက်တင်ခံရသည်။ အမေရိကန်တို့ထောက်ပံ့ငွေဖြင့် အစိုးရပြုတ်ကျအောင် ဆောင်ရွက်သည်ဟု စွတ် စွဲခံရသည်။
ကမ္ဘောဒီးယားကို ၃၃ နှစ်ကြာအောင်အုပ်ချုပ်ပြီးနောက် မစ္စတာဟွန်ဆန်သည် မည်သည့်အချိန်တွင် ဘက်ပြောင်း ရမည်ဆို သည်ကို နားလည်နေသည်။ လယ်သမားတယောက်၏သားဖြစ်ပြီး ခမာရှု့ခ်ျ၏ စစ်သားလည်းလုပ်ခဲ့သည်။ ၁၉၇၅ – ၁၉၇၉ ခုနစ်အထိ ခမာရှု့ခ်ျစစ်တပ်ကအုပ်စိုးခဲ့ရာ တိုင်းပြည်၏ ငါးပုံတစ်ပုံမျှ သေဆုံးခဲ့ကြသည်။ သူသည် ၁၉၈၇ ခုနှစ်တွင် အိမ် နီးချင်း ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသို့ ထွက်ပြေးရသည်။ ဗီယက်နမ်အစိုးရ ခမာရှု့ခ်ျကိုဖြုတ်ချပြီး အစိုးရဖွဲ့သောအခါ ၂၆ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သော ဟွန်ဆန်က နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအဖြစ် ပြန်ရောက်လာခဲ့သည်။
၁၉၉၂ ခုနှစ် ကုလသမ္မဂ္ဂရောက်လာသောအခါ ဟွန်ဆန်သည် အသွင်ကူးပြောင်းရေးက ဝန်ကြီးအဖြစ် ခိုင်ခိုင်မာမာ ဖြစ်နေ ပါပြီ၊၊ သူသည် တွဲဖက်ဝန်ကြီးချုပ်ကို ဘေးဖယ်ပြီး မကြာမီရွေးကောက်ပွဲတွင် သူတို့ပါတီက နိုင်လိုက်သည်။ သူ၏နိုင်ငံရေးသက်တမ်းလျောက်လုံးအတွင်း အမေရိကန် မုန်းတီးရေးဝါဒမှာ မပြောင်းလဲခဲ့ပေ။
သူသည်မဲခေါင်မြစ်ကမ်းခြေမှ ဝါးဖြင့်ဆောက်ထားသော အိမ်တစ်လုံးတွင်ကြီးပြင်းခဲ့ရပြီး အမေရိကန်တို့က သဲကြီးမဲကြီး ဗုံးချခဲ့သောနေရာဖြစ်သည်။ ဗီယက်နမ်တို့ကခန့်ထားသော အစိုးရအဖွဲ့ကို ဦးဆောင်နေရစဉ်ကာလတစ်လျှောက်လုံး၌ အမေရိကန်တို့က သူ့ကို အသိအမှတ်မပြုခဲ့ပေ၊ ဗီယက်နမ်စစ်မှ ဆုတ်ခွာနေရချိန်တွင် ကမ္ဘောဒီးယား ကော်နာလေးတခုတွင် ရှိနေသော ခမာရှု့ခ်ျအစိုးရကို အသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။
ဟွန်ဆန်ကို အိမ်ဖြူတော်သို့ ဘယ်သူကမှမဖိတ်ခေါ်ခဲ့။ သို့သော် ပီကင်းကိုမူ အကြိမ်များစွာရောက်သည်။ ၂ဝ၁၆ တွင် မစ္စ တာရှီဂျင်ပင်းက ကမ္ဘောဒီးယားသို့အလည်ရောက်လာသည်။ ဤခရီးစဉ်မတိုင်မီ ကာလတစ်လျှောက်လုံး တရုတ်၏ တောင် တရုတ်ပင်လယ်တလျှောက် သူတို့ပိုင်ပါသည်ဆိုမှုကို ထောက်ခံခဲ့သည်။
မဲခေါင်မြစ် တံတားဖွင့်ပွဲသို့တက်ရောက်လာသော နယူးရော့တိုင်းခ်သတင်းထောက်ကို “Fake New” ဟု ပြောခဲ့သည်။ မတ်လ ၃ ရက်နေ့က အမေရိကန်သံအမတ်ကြီးကို လူလိမ်သံအမတ်ဟု ခေါ်ခဲ့သည်။
ဟွန်ဆန်သည် ဖေ့စ်ဘွတ်ကို သုံးသူဖြစ်သည်။ အင်တာနက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုက သူ့ကိုတတိယ လူအသိများဆုံး ခေါင်းဆောင် အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။ အတိုက်အခံတို့ကမူ သူရသော “Like” များမှာ ကုမ္ပဏီတစ်ခုကလုပ်ပေးရသည်ဟု စွတ်စွဲ သည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ အတွင်းက အဝတ်အထည်စက်ရုံ အလုပ်သမား ၁ဝ,ဝဝဝ ကျော်ကို ဖေ့စ်ဘွတ်မှ နှုတ်ခွန်းဆက်စကား ပြော သည်။ တစ်နာရီမျှကြာအောင်စကားပြောရာ “ဝမ်းလျှောရောဂါကာကွယ်ရန် မိမိသေးကိုသောက်ရသည်” ဟူသော စကား အထိပါသည်။ Like တွေ လက်မထောင်ပုံတွေ သူ့ဖေ့စဘွတ်စာမျက်နှာတွင် ပလူပျံနေသည်။ တက်ရောက်လာသူတွေကို စာအိတ်တွင် ၅ ဒေါ်လာတန်များကို ဟွန်ဆင်နှင့်ဇနီးမှဟူ၍ ထည့်၍ ဝေငှသည်။
ကမ္ဘောဒီးယားရွေးကောက်ပွဲမှာ ဇူလိုင် ၂၉ ရက်တွင်သတ်မှတ်ထားရာ ဟွန်ဆင်အဖို့ လူငယ်များက မဲပေးပါလိမ့်မည်ဟု အာ မခံချက်မရှိပေ။ ၂ဝ၁၃ ခုတုန်းက သူ့အစိုးရရှုံးလုနီးပါး ဖြစ်ခဲ့ရသည်။
သူ့သားအငယ်ဆုံး (Hun Mang) ကို တိုင်းပြည်မှ လူငယ်ကလေးများကိုဆွဲဆောင်ရန် တာဝန်ပေးသည်။ အကြီးဆုံးသား (Hun Manet) မှာ အမေရိကန်ဝက်ပွိုင့်တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့ရခဲ့ပြီး တချိန်တွင် သူ့ကိုဆက်ခံရန် ရာထားသည်။ သူ၏သား အလတ် (Hun Manith) မှာ ထောက်လှန်းရေးလုပ်ငန်းများဖြင့် တာဝန်ပိနေသည်။ “ဒီမိုကရေစီဆိုတာ အရေးကြီးတဲ့အရာပါဘဲ ဒါပေမဲ့ ဒီတခုတည်းရှိတာမဟုတ်ပါဘူး“ ဟု အမေရိကန်နှင့် သြစတြေးလျနိုင်ငံ တို့တွင် ပညာသင်ကြားခဲ့သူ Hun Mang က ပြောသည်။
ကမ္ဘောဒီးယားဟာ တည်ငြိမ်ပြီး တိုးတက်နေပါတယ်ဟု တရုတ်ပြည်သံအမတ်ကြီးက မဲခေါင်တံတားအခမ်းအနားတွင် ပြော သည်။ ကမ္ဘောဒီးယားသည် လွန်ခဲ့သောနှစ်က တိုးတက်မှုကို ၆. ၉ ရာခိုင်နှုန်း ရှိသည်။
၂ဝဝ၅ ခုနှစ်က ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတဝက်သည် ဆင်းရဲမှုတိုင်း၏အောက်တွင်ရှိခဲ့ပြီး ၁ဝ နှစ်မျှအကြာတွင် ၁၄ ရာခိုင်နှုန်း သာရှိတော့သည်။ သို့သော် သန်းပေါင်းများစွာသော စက်ရုံလုပ်သားများ၏ ဆန္ဒပြပုံများကိုမူ ကျည်ဆံဖြင့် ဖြိုခွင်းခံခဲ့ရသည်။
အမေရိကန်သည် ခေါင်းဆောင်နေရာကိုမယူဘဲ နောက်သို့ဆုတ်သွားသည်။ သူထွက်သွားသောကွက်လပ်တွင် တရုတ်က နေရာဝင်ယူဘို့ ကြိုးစားနေသည်။ တရုတ်၏အကူအညီသည် ဘယ်သောအခါကမျှ နှောင်ကြိုးကင်းသည်မဟုတ်၊ ကိုယ် ကျိုးမပါဘဲ ကူညီမှုသက်သက်ဆိုသည်မှာ တရုတ်တို့၏ လုပ်လေ့ရှိသည်မဟုတ်ပေ။
Ref: Embracing China, Facebook and Himself, Cambodia’s Ruler Dogs In, Hanna Beech March 17 2018 New York Times.
အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စာများ၊ ဆောင်းပါးများ ...:ကိုသန်းလွင်, ရသဆောင်းပါးစုံ